Meksika: Mifanentana ny Mpiserasera Ho Fanampiana Ny Mponina Tarahumara · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Janoary 2012 9:39 GMT
Nanohy hatrany ny fitantarana izay lazaina fa famonoan-tena nataon'ny mponina teratany Tarahumara ny Univisión. Ao amin'ny hafatra navoakany ao amin'ny pejiny Tumblr, nilaza izy ireo fa “nahazo vaovao mametraka fisalasalana momba izany filazalazana izany.” Nanamarika izy ireo na dia izany aza fa , “Ny loharanom-baovao voarain'ny Univision dia manamafy fa nisy tokoa ny krizy ara-tsakafo tao anatin'ny faritra Raramuri, tonga tao an-toerana ny sampan-draharahan'ny governemanta nanolotra sakafo vonjimaika, izay mety haharitra iray volana , saingy tsy tokony hihoatra ny fotoanan'ny maintany ao Avaratr'i Meksika amin'izao fotoana izao.”
Nahatonga ny mpiserasera Meksikana hanao fanentanana ny vaovao tsy voamarina izay nilaza fa Teratany Tarahumara 50 avy ao avaratry ny firenena Chihuahua no namono tena mba hialana amin'ny hanoanana. Miatrika olana maro isan-karazany ny Tarahumara, fantatra amin'ny anarana koa hoe Raramuri, olana toy ny fahaverezan'ny fomba fiteniny, ny fampiasana ny taniny, fidiram-bola tsy zarizary ary olana amin'ny tsy fahampian-tsakafo.
Naneho ny ahiahiny avy hatrany ireo mpiserasera manerana ny firenena. Nampisaina tao amin'ny Twitter ny tenifototra #SierraTarahumara, teraka ny hetsika, naneho ny fahatezerany ireo mpisera Twitter ary nikarakara fanangonana sakafo ho an'ny mponina manodidina, tany amin'ny fiangonana ary ny anjerimanontolo.
Humberto Cantu (@dermacantu) mampitaha ny vola holaniana amin'ny fitsidihan'i Papa sy ny tsy fisian'ny fanampiana ho an'ny Tarahumaras:
Marcelo Ebrard (@m_ebrard), Lehiben'ny Governemanta ao antanànan'i Meksika, nangataka fanampiana:
Nitatitra ny bilaogy Animal Politico fa nandà ny fisian'ny famonoan-tena 50 araka ny hita amin'ny lahatsary YouTube ny governemantan'ny Chihuahua :
Manaraka izany, tao amin'ny Tumblr, namoaka tantara mikasika ny fanambarana momba ilay famonoan-tena ny Univisión ary nanisy fanitsiana sy nanome vaovao farany: